बिरामी अस्पतालमा छट्पटाउँदै, आफन्त अक्सिजनको लाइनमा - Sajha Mobile
Posts 1 · Viewed 520 · Go to Last Post
२९ वैशाख, काठमाडौं । ‘खै खै कति रुपैयाँ हो, मेरो बिल काटिदिनुस्’ काँधमा बोकेको अक्सिजन सिलिन्डर भुईंमा बिसाउँदै एक युवक बोल्छन् ।
बालाजुको शंकर अक्सिजन ग्याँस उद्योगमा पाइने जानकारी पाएपछि उनी खाली सिलिण्डर मोटरसाइकलमा बोकेर उद्योगमा पुगे । करीब चार घण्टाको पर्खाइपछि उनको खाली सिलिण्डर भरिएको छ । निकै लामो समय लाइन लाग्नु परेकाले उनी आक्रोशित थिए ।
‘अस्पतालबाट कतिपटक फोन आइसक्यो, यो खेलाँची होइन नि’ उनले भने, ‘मेरो आमालाई केही भयो भने…’ उनी दुःखी देखिए । आमा अस्पतालमा कोरोनासँग जुधिरहेकी छिन्, छोरा ग्याँसको बन्दोबस्तीमा ।
३८ वर्षीया पूजा बस्नेत आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा कोरोनासँग जुधिरहेकी छिन् । पूजाका लागि अक्सिजन लिन छिमेकी विष्णु खड्का बालाजु आइपुगेका छन् । अक्सिजन पाउन ठूलै युद्ध लडेझैँ भइरहेको उनले सुनाए । बल्लतल्ल एक सिलिण्डर भरेका छन् । तर अब यो सकिएपछि भर्न नपाइएला भन्ने ठूलाे चिन्ता उनलाई छ ।
‘प्रशासन कता हो ? लौन मलाई देखाइदिनुस्’, अलि चाम्लिङले उद्योगको मूल गेटमा उभिएका सुरक्षा गार्डलाई भने । चाम्लिङ सिलिण्डरको खोजीमा त्यहाँ आइपुगेका थिए । उनले दर्ता गर्ने ठाउँमा सिलिण्डर खोज्दै आएको सुनाए । सिलिण्डर नपाउने जवाफ पाएपछि उनी उद्योगको प्रशासन शाखा खोज्दै हिंडेका रहेछन् ।
ग्याँस भर्ने भवनसँगै रहेको अर्को भवनको पहिलो तल्लामा उनी चढे । जहाँ उनले खोजेको उद्योगको प्रशासनिक काम हुने ठाउँ थियो । शंकर अक्सिजनका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहेका थिए । बाहिरै सिलिण्डर छैन लेखिएको थियो । तर त्यसले उनको चित्त बुझेन ।
ग्रीनसिटी अस्पतालमा रहेको आफन्त बिरामीका लागि सिर्जना कार्की पनि अक्सिजन सिलिण्डरको खोजीमा भौंतारिरहेकी छिन् । उनलाई चिनजानको मान्छेले बालाजुमा पाइन्छ भनेपछि यहाँ आएको सुनाइन् ।
‘मेरो आमालाई कोरोना लागेको छैन, तर पुरानै रोगले अक्सिजनकै सपोर्टमा राख्नु परेको छ’ उनले भने, ‘अब सरकारले अक्सिजन नदेऊ भन्यो भने मेरो आमालाई मैले कसरी बचाउने ?’
तस्विरः आर्यन धिमाल/अनलाइनखर
Visitor from US is reading VISIT POKHARA, NEPAL
Visitor from US is reading बिरामी अस्पतालमा छट्पटाउँदै, आफन्त अक्सिजनको लाइनमा
Visitor from US is reading "मन" ...................
Visitor from US is reading TEXAS TECH UNIVERSITY
· Posts 1 · Viewed 254